4 yakavhurwa sosi dzimwe nzira kuMicrosoft Project | Linux Vakapindwa muropa
Nguva manejimendi chinhu chakakosha kwazvo kune wese munhu, kunyanya kune avo vanoshanda mumakambani kana kugadzira chigadzirwa chigadzirwa. Kune izvi isu tinofanirwa kuve tichida kwazvo nepurogiramu yedu kana isu tinogona zvakare kuve neyekushandisa komputa inoyera uye kubata nguva yemapurojekiti nebasa rezuva nezuva.
Microsoft inoshandisa system vashandisi vane sarudzo yeku Microsoft Project, chirongwa chakapinza muMicrosoft Office inotarisira, inoronga mapurojekiti akaomarara uye mabasa. Iyi software haina kuwanikwa muGnu / Linux asi ivo varipo mamwe mapurogiramu akanakisa uye akasununguka zvachose iyo yatinogona kuisa mune yedu yatinoda kugovera.
4 Calligra chirongwa
ProjectLibre forogo yeiyo OpenProject chirongwa, maapplication maviri anoedza kutevedzera kana kutsiva Microsoft Project. ProjectLibre ndeye application inowirirana neMicrosoft Project 2003, 2007 uye 2010 mafaera. Iyo zvakare inobvumidza iko kushandiswa uye kuiswa kweGantt Chati, zviwanikwa histograms, diary uye software kuronga chirongwa kana maneti dhizaini pakati pevamwe.
ProjectLibre ine musiyano mukuru zvine chekuita nemamwe mapurogiramu uye ndizvo pane zvinyorwa zvikuru pamusoro pekushandisa mumitauro yakati wandei, magwaro atinogona kubvunza nekuparadzira pakati pekambani kana iri nzvimbo yatinoda kusvika. ProjectLibre tinogona kuiwana kubva yako Sourceforge peji zvemahara.
Ichi chishandiso chine shanduro mbiri: imwe yemahara uye imwe yakabhadharwa. Iyo yemahara vhezheni inovhara zvakakosha zvido kusanganisira rutsigiro rweMicrosoft Project mafaera, gantt machati, software kuronga chirongwa, inosanganisira iyo scrum yekuvandudza system uye runyorwa rurefu rwemabasa. Iyo yakabhadharwa vhezheni ine ese ari pamusoro mabasa asi zvakare inosanganisa maficha senge kuiswa kweakazvimiririra logo muchirongwa, gore rekushandisa, masevhisi senge mameseji, nezvimwe ... Anokwezva mabasa emakambani uye vezvemabhizinesi vanoda kuita kukuru kuita. Uye kune avo vasingadaro, vanogara vaine iyo yemahara vhezheni. OpenProject inogona kuwanikwa kuburikidza peji rayo repamutemo.
Planner ndiyo yechinyakare sarudzo kune Microsoft Project kunze uko uye zvakare iyo isina kuongororwa kwenguva refu. Kunyangwe zvakadaro, nzira yayo yekushanda inochengeta chirongwa ichi seimwe yeanonyanya kushandiswa. Planner inoshandisa xml uye PostreSQL mafaera kushanda.
Uye zvakare, Murongi anotendera iwe kutumira kunze zvirongwa kana zvikamu zvemabasa mu pdf fomati, izvo zvinowedzera kufambisira mberi kufambiswa kwemapurojekiti nevarongi. Planner inosangana chaizvo neGnome nekutenda kumaraibhurari eGTK, asi ichokwadi kuti mafomati matsva eMicrosoft Project haazvizive zvakanaka Kunyangwe zvakadaro, kana isu tichida kuwana kana kuziva zvakawanda nezvePlanner, in yayo yepamutemo webhusaiti tichawana ruzivo rwese rwuripo.
Iyo Calligra hofisi suite ine dzimwe nzira dzakawanda kumicrosoft Office zvirongwa. Ronga ndeimwe yedzimwe nzira. Calligra Chirongwa chirongwa chinoedza kutevedzera kana kuve yemahara imwe nzira kuMicrosoft Project, asi chaizvo haisi kubudirira. Kunyangwe izvi, inopa zvinonakidza mabasa senge kuenzaniswa kwemapurojekiti kana kuparara kwezviitiko uye mutengo wedanho rega rega, chimwe chinhu chinonakidza kumakambani mazhinji uye mapurojekiti. Calligra inogona kuiswa pane chero kugoverwa kweLinux sezvazviri kana inowirirana neKDE Plasma.
Microsoft Project haisi chishandiso chiri nyore kutsiva kubvira, kusiyana nevamwe, nhamba yayo yevashandisi haina kukura zvakanyanya; Nekudaro, kana ndichifanira kusarudza imwe nzira, pasina kupokana ini ndichasarudza OpenProject, chirongwa chakatsiga uye chakasimba chinopa mabasa uye maficha akaenzana neMicrosoft Project uye kune mamwe maFree Software zvirongwa. Asi, ndinoziva kuti havazi vese vanozoda chirongwa ichi, nekudaro ndakakupa imwe nzira ina, zvirongwa zvina zvatinogona kuedza kushandisa pasina muripo uye nekuona kuti zvinoshanda sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » 4 yakavhurwa sosi dzimwe nzira kuMicrosoft Project
Mhoro Joaquin, chero imwe nzira ye visio?
Mhoro, seimwe nzira yeVISIO ndinogona kukurudzira DIA, DRAW kubva kuLibreoffice uye XMIND.
Zvinonzwisa tsitsi kuti hapana openource software inodarika MS Project, ndapedza nguva ndichitsvaga imwe nzira uye hapana inoita kunge iri pabasa racho.
Muchidimbu, chakanakisa chinhu chinenge chiri chekupa mukusimudzira kweimwe yeaya maSUITES.
Ndatenda kwazvo neruzivo. Ini ndichaedza projekablibre uye ini ndichakuudza
Luis Anogona akadaro
Wakanakisa mupiro, ndatenda zvikuru!
Pindura kuna Luis Can